Endri-javatra - Chain Supply manaraka
NeXTchain dia iray amin'ireo vahaolana e-varotra rehetra tsara indrindra hampitomboana ny orinasa dropshipping manerantany.
01 / Vokatra mandresy an'arivony
Ny vokatra mandresy no lakilen'ny fihazonana fivarotana an-tserasera mahomby. Ajanony ny fandaniam-bola amin'ny vokatra ratsy, NeXTChain dia nanakarama manam-pahaizana hanome vokatra an'arivony an'arivony hanampiana ireo mpivarotra hamidy hanamora ny varotra.
Fandefasana 02 / Manerantany
Mpiara-miasa NeXTChain miaraka amina mpitatitra 300+ maneran-tany hitondra safidy safidy lafo sy azo antoka ho an'ny fandefasana eran-tany. Miorina amin'ny rafitra manan-tsaina ananantsika dia afaka misoroka mora foana isika mandritra ny vanim-potoana be atao toy ny Krismasy sy ny Zoma Mainty, mandritra izany fotoana izany dia manome ihany koa ny zotram-pandefasana.
03 / Fenoy ny baiko amin'ny be
Azonao atao ny manatanteraka ny baiko isan'androinao amin'ny alàlan'ny tsindry vitsivitsy fa tsy tsirairay, dia hampirina entana sy handefa mivantana ireo vokatrao amin'ny mpanjifanao izahay.
04 / Auto Inventory ary ny fanavaozana ny vidiny isan'andro
Manamarina ny haavon'ny tahirin'ny entana isan'andro izy io ary mitazona hatrany ny haavon'ny tahirin'ny entanao ary mampihatra ny fitsipika momba ny vidiny hanavaozana ho azy ny vidin'ny entana.
05 / Facebook Ads Target manome
Facebook Ads dia iray amin'ny lalam-barotra tsara indrindra hanombohana ny varotra, ary manome tanjona marina amin'ny Facebook Ads ho an'ny vokatra azo rehetra izahay, mba hanampiana ny mpivarotra Shopify hampitombo ny varotra 10X-ny ihany.
06 / Fametahana marika sy famonosana
Ny fonosana rehetra dia halefa ambanin'ny marikao, ary manolotra fonosana namboarina ihany koa izahay hanampy anao hanangana ny marikao.